China 8oz 250ml amber boston boribory fitaratra tavoahangy misy famafazana sprayer fanamboarana sy orinasa | Easypack
8oz 250ml amber boston boribory fitaratra tavoahangy misy sprayer
Tavoahangy boribory boribory boribory 8oz, vozony habe 28-400. Ny fitaratra dia manana mangarahara avo, azo loko, manana fanoherana simika avo, ary mahatohitra ny hafanana sy ny hatsiaka. Ity tavoahangy vita amin'ny vera vita amin'ny veromanitra misy volo 8 etama ity dia mety tsara amin'ny fiarovana ny vokatrao menaka amin'ny taratra UV.
Mahagaga tsotra izao ity tavoahangy ity amin'ny famafazana ireo huile essentielle tianao indrindra sy afangaro!
Ny tavoahangy vera boribory boribory boribory 8oz miaraka amin'ny tampony dia azo averina ampiasaina amin'ny fampiasana betsaka; azo ampiasaina amin'ny menaka fanosotra, savony, detergent na kojakoja mahandro
Ny tampon'ilay sprayer dia mety tsara amin'ny sprays, rano, detergents sns. ny tavoahangy fitaratra dia vita amin'ny vera matevina afaka manasa lovia azo antoka
Ny tavoahangy fitaratra dia tsara ho an'ny vokatra hatsaran-tarehy namboarina; mamorona ny vokatra fanadiovana na hatsaran-tarehy tianao ary ampio amin'ny tavoahangy
Ireo tavoahangy fitaratra dia manana famolavolana maoderina sy maoderina - misy marika fizarazaran-tany izay afaka manome anarana mora foana ny tavoahanginao; ireo tavoahangy fitaratra ireo dia ho tsara tarehy amin'ny efi-trano rehetra ary mety tsara amin'ny fanomezana ny vokatra hatsaran-tarehy na fanadiovan-tranonao mandritra ny fialantsasatra
Ny tavoahangy fitaratra dia tsy misy BPA ary io no vahaolana tsara indrindra amin'ny tavoahangy plastika hafa toy ny detergent, toner, vokatra hatsarana, sns.
Ny capacité dia 250ml.
Vita amin'ny vera soda-sokay mazava tsara.
Mifanaraka amin'ny fanidiana 28mm.
Misy tavoahangy 500ml 1000ml lehibe kokoa.
MOQ dia 3.000 PCS
Fihenam-bidy lehibe amin'ny baiko betsaka.
Famaritana marika eo amin'ny tavoahangy.
Sary famantarana manokana
Previous: 1000ml tavoahangy ronono fitaratra frantsay litatra 1 litatra misy sarony plastika tsy misy porofo
Manaraka: Tavoahangy fanadiovana menaka manitra 300ml vera miaraka amana tsifotra
Tavoahangy paompy vita amin'ny vera
Tavoahangy paompy amber
Tavoahangy fitaratra miaraka amina famoahana paompy
Tavoahangy fitaratra misy paompy famaohana
Tavoahangy paompy kosmetika fitaratra
Tavoahangy fitaratra fitaratra misy paompy
Tavoahangy paompy fitaratra ho an'ny menaka tena ilaina
Tavoahangy paompy fitaratra ho an'ny shampoo
16oz 500ml mazava boston boribory fitaratra ...
0,5oz 1oz 2oz 4oz kobalt biriky boribory borosy ...
Tavoahangy fanadiovana menaka manitra 300ml vera ...
500ml 16oz kobalt manga boston vera boribory trigg ...
Tavoahangy fitaratra fitaratra misy paompy, Tavoahangy paompy fitaratra ho an'ny menaka tena ilaina, Tavoahangy fitaratra miaraka amina famoahana paompy, Tavoahangy paompy fitaratra, Tavoahangy paompy fitaratra ho an'ny shampoo, Tavoahangy fitaratra misy paompy famaohana,